Gbasara Anyị - MOLONG TATTOO SUPPLY CO., LTD
Ogologo igbu anụ ọkọnọ CO., LTDnke e guzobere na 2009, onye ọkachamara na-emepụta akụrụngwa na China, na-enye akara zuru ezu nke akụrụngwa ọkachamara na ngwa. Egbu egbugbu, Cartridge Tattoo, Igwe igbu egbugbu, Ihe eji egbu egbugbu, Inyo igbu egbugbu, njigide a na-achusi, nkpuchi a na-achu acho, ntunye ike, onunu ogwu, onodu ihe eji egbu egbu, ihe eji egbu egbu, ihe ndi ozo, ihe ndi ozo.
Ihe mgbaru ọsọ anyị bụ ịnye ndị ahịa anyị ngwa ngwa, ọrụ enyi na ọkachamara na ngwaahịa dị elu, iji wulite mmekọrịta dị ogologo oge na ndị ahịa anyị dabere na ngwaahịa anyị na ọnụahịa ụlọ ọrụ asọmpi.
Anyị na-eme ọrụ zuru oke na ngwaahịa dị elu. Site na ndị mbido egbugbu gaa na ndị ọkachamara Ọkachamara, ngwaahịa anyị na-adọta uche ha. Nabata azịza na aro ọ bụla sitere na ndị ahịa anyị bara uru. Anyị ga-aga n’ihu ịkwalite ngwaahịa na ọrụ anyị.
Anyị na-eje ozi USA, Canada, Europe, Asia, South America, Australia, New Zealand, Middle East mba, South Africa na mba ndị ọzọ niile na-aga mba.
Ndị otu anyị dị mma na enyi, biko kpọtụrụ anyị n'efu ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla.
Mmadụ bịa ka Ogologo igbu egbugbu, companylọ ọrụ anyị bụ onye na - eweta ngwa ngwa ngwa ngwa na egburu egbugbu na China, ọpụrụiche dị iche iche na ntinye egbugbu
Anyị nwere ọtụtụ afọ na ahụmịhe n'ichepụta Mkpa Mgbu, Mgbu Mgbu Mgbu, Mgbu egbugbu, Mgbu, Atụmatụ, Ntinye Ike, Ntugharị ,kwụ, Clip Cord wdg.
Anyị na-enye ngwa eji egbu egbu dị elu na ọnụahịa kacha mma. Nye ndị ahịa n’ụwa niile nhọrọ kacha mma iji nwee ọmarịcha ngwaahịa.
Companylọ ọrụ anyị dị na Ntọala # 2 Owuwu # 9 Zongtang District 1 Yiwu Zhejiang China 322000
Anyị onwe ika: MO, LBB, WhatsBravo, Ire ọkụ, HRK, Ajọ Ifufe Tattoo agịga.
Mmadụ Bịa na-ekwu okwu banyere ịghọ ire gị n'ụlọnga nke anyị ika ngwaahịa na-ere nanị na mba gị ma ọ bụ mpaghara ma ọ bụrụ na ọnọdụ na-zutere. Anyị nwekwara ike ime OEM ọrụ maka ndị ahịa anyị 'ika ngwaahịa.
Biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị maka ịmatakwu ihe ọmụma ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ngwaahịa anyị. Na-eche ajụjụ gị, iji wulite mmekọrịta azụmahịa anyị ogologo oge, mee ka azụmahịa anyị na elu.